China Beveled Mirror fekitori uye vagadziri | LYDGLASS
Girazi rakavezwa rinoreva girazi rine makona akachekwa uye kukwenenzverwa kune imwe kona uye saizi kuitira kuti ibudise chitarisiko chakashongedzwa, chakavezwa Ichi chinosiya girazi rakatetepa kumucheto kwegirazi.
Chii chinonzi bevel pagirazi?
A girazi rakavezwa inoreva a girazi iyo ine micheto yayo yakatemwa uye yakabwinyiswa kune yakatarwa kona uye saizi kuitira kuti ibudise yakashongedzwa, yakarongedzwa kutaridzika. Maitiro aya anosiya girazi rakatetepa kumativi ese e girazi.
Chii chakaita girazi rinopinza rinotaridzika?
A girazi rakavezwa inoreva a girazi iyo ine yayo micheto cheka nekukwenenzverwa kune yakatarwa kona uye saizi kuitira kuti ibudise yakashongedzwa, yakagadzirirwa tarisa. ... Vane slant (kana bevel) yemamita imwe chete paupamhi pavari micheto kubata chiedza - kugadzira zvinonakidza zvinoonekwa.
Beveled micheto chinhu chakajairika chemirazi uye mawindo emawindo, zvichipa kutaridzika uye kutaridzika kutaridzika. Sezvo iwo mamipendero ane beveled achipa furemu-senge yekunyepedzera, girazi rako rinotaridzika kunge rakareruka pasina rinorema furemu rihuremu. Iwe unogona zvakare kutenga yakagadziriswa beveled girazi kuti ienderane neyako dhizaini zvido.
Unoziva sei kuti girazi iri mhando yakanaka?
Mumhando yegirazi, ita shuwa kuti girazi harina zvinoenderana uye harikanganisa maonero. Girazi rinofanira kunge riine nzvimbo yakati sandara. Magirazi epamba anowanikwa mu1 / 8, 3/16 uye 1/4-inch ukobvu. Zvinokurudzirwa kuve negirazi ine 1/4-inch ukobvu, nekuti hazvizokanganisa kuratidzira
Pashure: 8mm Grey akatsamwa girazi sauna madhoo
Zvadaro: 5mm yakajeka girazi reAluminium patio yekuvhara uye musasa
Beveled Girazi Yemukati Girazi
beveled girazi zvigadzirwa
Beveled Wall Girazi
Bevelled Edge Magirazi